Isticmaalka shidaalka 737 Max 8
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 3 bilood 1 toddobaad ka hor #1748
Shaqada fiican ee Rikoooo ee v1.03 Boeing 737 Max 8, laakiin dhowr duulimaadyo kadib, isticmaalka shidaalka aad ayuu u hooseeyaa oo aad uga fog yahay tirooyinka dhabta ah.
Ilaa hadda waxaan helaa isku celcelis ahaan sida ugu hooseeya 6.020 rodol / saacaddii doonnida (FL370 @ 0,79M). Ma jiraa qof la yimid xal?
Moodeellada kale, waxaan isbadal ku sameeyay doorsoomayaasha:
Laakiin uma jeedo inaan wax isbeddel ah ku sameeyo shaqadii wanaagsanayd ee kooxda Rikoooo, ee waxaan halis galinayaa inay ku dhacdo qaladaad CRC, anoo ka dhigaya tusaalaha inuusan mar dambe shaqeyn.
Wixii talo ah waa la qadarin doonaa, mahadsanid
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 bilood 3 14 hours ago #1758
Isku day inaad beddesho qaybaha ku yaal Duullimaadyadaada Diyaaradda ee ku yaal (tusaale ahaan C: \_ aaladda faylasha Barnaamijyada 'Microsoft Games \_ Microsoft Simulator X \_ SimObjects \_ Diyaaradaha \_ Boeing 737-MAX8 Multi-Livery)
oo leh qaybahaan HADDII ay ka duwan yihiin.
Mashiinka.1 = -48.88, 16.66, 0
shidaal_raac_gaag = 0.004
lagu qiimeeyay_N2_rpm = 15000
ka dib markii ay ka dambeyso_ciyaaro = 0
dib-u-habayn = 1
Waxaan rajeynayaa in aan caawiyay
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: dilcenza
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 bilood 3 3 hours ago #1761
Khadadkaadu waa ok, waa isku mid wixii aad ka heli karto diyaaradda asalka ah. Dhowr maalmood ka hor waxaan sameeyay naftayda xoogaa mod ah faylka oo keliya si aan u hubiyo, oo sida aan uga shakisan nahay, waxaa jira hubinta amniga (CRC ama wax la mid ah) qoraaga si aanan waxba u beddelin. Waxaan kaliya u beddelay "oil_flow_scalar" oo u beddelay qiimeyn aniga qudhaydu ku heshay, laakiin xirmada markaa kuma xirnaan doonto FSX bilow. Marka dib ayaan u dhigay faylka asalka ah si xirmooyin mar labaad la iibiyo.
Xaaladda ayaa ah in qiyamka hadda jira uu bixiyo shidaal aad u hooseeya (waxaad ku duuli kartaa adduunka oo dhan 100% shidaalka xanniba), oo waxaan aad u jeclahay inaan "duulo" anigoo tixgelinaya diiwaannada shidaalka / waqtiga. Shaqo aad u fiican Rikoooo, uun hagaajin ayaa loo baahan yahay si ay u hesho shaqo ku dhawaad ​​dhammaystiran. Waxaan rajeyneynaa in qorayaashu ay sameyn doonaan waqti uun ama laga yaabo inay noo oggolaadaan (adeegsadayaasha) inay gaaraan isbeddelo si aan u helno qiimayaal badan oo dhab ah.
Waad ku mahadsan tahay soo-jeedintaada !!
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 4 todobaad ka hor #1762
Isku day inaad wax ka bedesho dayaarada diyaaradaha ee leh xuquuqaha maamulka.
Aniga ahaan way shaqeeysay. Waxaan u beddelay qulqulka qulqulka shidaalka illaa 1,68 haddana hadda waa macquul badan.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: PAUL1984, dilcenza
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 4 todobaad ka hor #1763
Kaliya waa la isku dayay, ma shaqeynin, xirmadii oo dhan mar kale waa dhammaadeen. FSX ma raacin baakada.
Waad ku mahadsan tahay dib-u-soo-ururintaada ...
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 4 todobaad ka hor #1765
My shaqo fiican
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 4 todobaad ka hor #1766
PAUL1984 & taabille451:
Habka loo adeegsaday ee CTRL + SHIFT + ENTER si loo tafatiro maamul ahaan loona shaqeeyay Adeegsiga habab kale ma shaqeynin.
Waxaan isku dayi doonaa dhowr duullimaad anoo isticmaalaya shidaal_flow_scalar = 1.68 oo waxaan soo sheegi doonaa natiijooyinka.
Mar labaad mahadsanid !!
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1782
Waxaa la sameeyay xoogaa tijaabooyin ah iyadoo la isticmaalayo oil_flow_scalar = 1.68 oo la timid natiijooyin (fiiri sawirada ku lifaaqan):
Isticmaalka Taksiga: 1.788 p
Isticmaalka Cimilada: 17.098 p / Hr (ka heer sare 13.750 p / Hr)
Isticmaalka maraakiibta: 4.953 p / Hr (qiyaasta 5.720 p / Hr)
Isticmaalka isbeheysiga: 3.154 p / Hr (qiyaasta heerka 3.295 p / Hr)
Shidaalka Safarka ee la Adeegsaday: 36.168 p (vs 39.732 p qorshaysan)
Wadarta isugeynta: 38.181 p
Dhanka kale, LittleNavMap ayaa la yimid tan:
Isticmaalka Cimilada: 15.837 p / Hr
Isticmaalka maraakiibta: 4.980 p / Hr
Isticmaalka isbeheysiga: 3.131 p / Hr
Wadarta isticmaalka: 38.179 p
Qiimaha isticmaalka Taksi iyo Climb waa sarreeyaa, Qiimaha ugaarsiga 'Cruise iyo descent' ayaa aad u yar. Bal u fiirso qiyamka N1, N2 & FF ee maraakiibta markabka (459 kts @ FL360). Ma fududa in diyaaradda la dhigo si loogu sameeyo jidka saxda ah. Laakiin waan sii socon doonaa, dabcan, waxaan ubaahanahay aqoon intaa ka badan oo ku saabsan nooca xisaabta ee isticmaalka iyo xiriirka uu la leeyahay doorsoomayaasha diyaaradda.cfg (tus.
Waxaan akhriyay caawimaadda MS at -> docs.microsoft.com/en-us/previous-versio...?redirectedfrom=MSDN
laakiin wali aad baan u jahwareersannahay, waan sii socon doonaa ...
Haddii qof u haysto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan la-talinta moodda waa laga mahadcelin doonaa
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1785
Waxaan furay faylka .cfg oo ah fayl qoraal ah, waxaan sameeyay isbeddelada kadib waxaan keydiyey sida cfg, waxaan sameeyay gadaal faylka asalka ah waxaanan sameeyay koobi oo dhajiyay kan cusub. Way shaqaysay, imikana diyaaradaydu waxay sidoo kale leedahay kayd shidaal oo macquul ah. Waligey kuma fekerin in aan hagaajiyo cfg dushiisa.
Waad ku mahadsantahay dhejinta dunta.
Isticmaalka shidaalka 737 Max 8 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1788
Hi, haa amberdog1
Way fiicantahay, PAUL1984 waxay dhajisay 1,68; iyo isticmaalka "kama dambeysta" ah ayaa aad ugu dhow heerka.
Waxaad isku dayi kartaa qiimayaal kale, oo 3 lambar leh lagu daray (1,678 ama 1,682), waxaadna heli doontaa natiijooyin aad u wanaagsan oo ku xiran habka duulimaadka.
Arinta kaliya ayaa ah in isticmaalka Climbku uu aad u sarreeyo, iyo goos goosyada Cruise iyo descent waa "waxyar" oo hooseeya.
Waxaan wali raadinaa xiriir "isugeyn / saami" ah, laakiin waxaa loo baahan yahay aqoon dheeri ah oo ku saabsan qiimayaasha kale ee ku saabsan .cfg ee mashiinka iyo Isku-kalsoonaanta iyo xiriirka ka dhexeeya. Haddii ay dhacdo inaad hesho macluumaad fadlan halkan noogu soo dir !!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.450